Daawo Wareysi: Gabar sheegtay inay aragtay raggii weeraray Hotel Naasa Hablood 2 & Qaabkii uu weerarku udhacay. – Xeernews24
Daawo Wareysi: Gabar sheegtay inay aragtay raggii weeraray Hotel Naasa Hablood 2 & Qaabkii uu weerarku udhacay.
29. Oktober 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Ayaan Cabdi Axmed oo gabadh dhalinyaro ah, ayaa waxay ka badbaaday weerarkii gelinkii dambe ee Sabtidii ay Shabaabku ku galeen Hotel Naasa Hablood 2 ee Magaalada Muqdisho.
Raggan oo watay dareyska Ciidamada Dowladda Soomaaliya, ayaa waxay sheegtay in qaarkood fuuleen qaybta sare ee hotelka, oo dad ay qafaal ahaan ugu haysteen, iyadoona ay dadkaasi qaarkood toogasho ku dileen.
HOOS KA DHAGAYSO WAREYSIGA
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/Naasa-Hablood-II7-180x135.jpg 135 180 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-29 08:04:242017-10-29 08:04:24Daawo Wareysi: Gabar sheegtay inay aragtay raggii weeraray Hotel Naasa Hablood 2 & Qaabkii uu weerarku udhacay.
MUUQAAL Goobjooge Sharaxay Wixii dhacay Iyo Bur-burka Hoteelka. Madaxda dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada oo kulan is-arag ah yeeshay...